I-DemoChimp: Zenzekelayo iiDemo zakho | Martech Zone
DemoChimp okwangoku ikwi-beta evaliweyo kodwa ujonge imibutho enomdla wokusebenzisa inkonzo yabo. I-DemoChimp ilungiselela idemo yemveliso, inyusa izinga lokuguqulwa kwewebhusayithi kunye nedemo-yokuvala umyinge ngexesha lokuthengisa, ngalo lonke ixesha uqokelela imveliso kubahlalutyi. I-DemoChimp iqwalasela ngokuzenzekelayo idemo ekuphenduleni kwiimfuno ezizodwa zethemba, njengomthengisi oyingcali.
Iimpawu zeDemoChimp kunye nezibonelelo:
Guqula ngakumbi abatyeleli kwiiNkokeli Abakhenkethi bakho kwiwebhusayithi baya kutyikitya rhoqo njengoko benxibelelana nomxholo owenzelwe wena. Xa ukhokelo lwakho lungena, unokubona ukuba ngawaphi amacandelo emveliso yakho abalulekile kubo kwaye ngawaphi amalungu ebengekho ukuze ukwazi ukulungelelanisa ukulandelelana kwakho.
Injini yeDemo ekrelekrele Ngaba ukhe usive isicelo, "Ungandithumelela idemo?" Ngoku unako, kwaye iDemoChimp ngokuzenzekelayo iguqule idemo njengoko iphendula kwiminqweno yamathemba, ikwenza kube ngokwakho njengomthengisi ophilayo. Unokubona ukuba ngubani owabelana naye ngedemo kwintlangano yabo ukuze ufumane kwaye ubandakanye yonke ipaneli yokuthenga.
Ukufikelela kwiDemo Analytics (iDemolytics ™) Emva kwemiboniso, iDemoChimp iqokelela idatha ebalulekileyo esekwe kwimpendulo kunye nezenzo zethemba ngexesha ledemo. Ezi zinto sizibiza ngokuba ziiDemolytics ™. Fikelela kwezi kubahlalutyi kwideshibhodi okanye ukubhola uye kwindawo ethembekileyo.
tags: usetyenziso lweedemoiqonga ledemodemochimpDemosiqonga ukubonisa imvelisoIidemo zemvelisoidemo yokuthengisaumboniso wentengiso
Oktobha 15, 2013 ngo-8: 24 PM
Enkosi ngale nto. Ndikwiqela lokuqalisa kwaye ukubambisana nomnikezeli onokubakho wokuqalisa ubuchwephesha kunokuba luncedo kuzo zombini iindlela.